Volvo ကုန်ကားဝန်ဆောင်မှုကင်ပိန်းထံမှရှိသင့်သော! - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Volvo ကုန်ကားဝန်ဆောင်မှုကင်ပိန်းထံမှရှိသင့်သော!
11 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Volvo ကုန်ကား, မော်ဒယ်နှင့်ကင်ပိန်းအကြား9စက်တင်ဘာလ 31 2013 ဒီဇင်ဘာလကမ်းလှမ်းကြိုတင်% လျှော့စျေး xnumx'y အထိကုန်တင်ကားများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်မှရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
2013 မော်ဒယ်များ, အကောင်အထည်ဖော်ကင်ပိန်းအတွက်ဆောင်ပုဒ် "သီးခြားအလှတရားရှိပါတယ် Volvo ၏တိုင်းခေတ်" ကုန်ကားလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှု pre နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်ထရပ်ကားများတွင်% xnumx'y မှတက်၏အထူးလျှော့စျေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေကမ်းလှမ်းနေဖြင့်စီးပွားရေးစက်များအဖြစ် Temsa Volvo ၏တူရကီဖြန့်ဖြူး။ ရောင်းအားလာမည့်ဖောက်သည်ကွောငျးဖျောပွပွီးနောကျ, ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Temsa ဆောက်လုပ်ရေး Volvo ကုန်ကားအမှတ်တံဆိပ်သောဤလှုပ်ရှားမှုကိုအတူ။ ဒါ့အပြင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး၏အစိတ်အပိုင်း; လာဝန်ဆောင်မှု thermos နှုန်းနှင့်ဧရိယာ၌ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်န်ဆောင်မှုများ၏ပမာဏအထက် 50 မှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ တူရကီ Volvo ကုန်ကားကင်ပိန်းယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ဝန်ဆောင်မှုမှာမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
လည်းဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအတွက် Volvo ကုန်ကားအမှတ်တံဆိပ် D7 အဘို့ဤဆွဲဆောင်မှုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး, D9 A2 / B, D11C 450, D12 A / C / D ကို 340 / 380 / 420 / 460 ၏ Temsa ဆောက်လုပ်ရေးအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်တုံ့ပြန်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတူရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ရှောက်သွားသောအခါနှစ်ပေါင်းယုံ 13 / 360 / 400 / 440 / 480, D520 B / F ကို, D13 ကို C 13, D460 C16 / C1 / C34A / C 550 / E ကိုမှ D610, TD103 တစ်ဦး / ES / EA ၏, OR 122F / FS အင်ဂျင်အမျိုးအစားများကိုအဘို့အမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်; Volvo ကုန်ကားက်ဘ်ဆိုက် www.volvotrucks.com.t ဖြစ်ပါသည် ဒါဟာ 444 85 86 ဖောက်သည်စောင့်ရှောက် Hotline နံပါတ်သို့မဟုတ် Volvo ကုန်ကား၏အနီးဆုံးအခွင့်အာဏာဝန်ဆောင်မှုမှရရှိသောနိုင်ပါသည်။
Manavgat နှင့် Alanya ပံ့ပိုးဖို့ ATSO မြန်ရထားကင်ပိန်း | အစာရှောင်ခြင်းရထားကင်ပိန်း 11 / 07 / 2013 အစာရှောင်ခြင်းရထားကင်ပိန်း: ထို့နောက် ATSO မြန်ရထားကင်ပိန်း Manavgat နှင့် Alanya ပံ့ပိုးမှု .Antaly စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်ညီလာခံသမ္မတအိမ်တော်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ Antalya ကုန်စည်ဒိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့, Burdur နှင့် Isparta Manavgat နှင့် Alanya ကနေအတူတကွခရီးစဉ်၏ program တစ်ခုဖျော်ဖြေအသုံးပြုပုံ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှတာဝန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဘုတ်အဖွဲ့မှအောင်မြင်မှုစေလိုကြောင်း။ ငြင်းခုံဖို့ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုများအတွက်အမြင်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများသမ္မတ Budak ACCI, Antalya မြန်နှုန်းရထားကင်ပိန်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ Manavgat နှင့် Alanya TSO TSO ကသမ္မတ Ahmet Boztaşနိုင်ငံတော်သမ္မတ Mehmet Sahin, လက်မှတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးထောကျပံ့အားပေးတော်မူ၏။ ACCI နှင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ATB ပထမဦးဆုံးရပ်တန့် ...
အတွက် Renault Trucks မှာချွေတာသုံးစွဲရေခဲသေတ္တာပို့ဆောင်ရေး 13 / 07 / 2019 လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးနှင့် Renault Trucks နှင့်အတူဆွဲဆောင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Express ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသံအတိုးအကျယ်တိုး။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Express ကိုထိုကဲ့သို့သောတန်ဆာဆင်သောအပင်အဖြစ်ထုတ်ကုန်များထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအောင်, အစားအသောက်ကနေ Mersin, Antalya ၏အလယ်ဗဟိုတွင်ဥရောပမှအထူးသဖြင့်လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတည်ရှိသည်။ တိုးမြှင့်ဝယ်လိုအားနှင့်အတူစီးပွားရေးအသံအတိုးအကျယ်တိုးတက်စေကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Express ကိုဖနျ Renault Trucks T ကစီးရီးအအေးကွင်းဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာခရီးအမြည်းအတွက်အားသာချက်ပေးပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Express ကို 80 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှုန်းကိုဗြိတိန်နဲ့နယ်သာလန်တို့အပါအဝင်ဥရောပ၌အအေးကွင်းဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ, ပေးထားပါတယ်။ 2018 ဧပြီလကုမ္ပဏီနှင့်အညီဆွဲဆောင်မှုဒေသများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ Renault Trucks T ကစီးရီးကိုထပ်မြင့်မားတဲ့စိတ်ကျေနပ်မှု 520 T ကအငှားယာဉ်များကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ...
Manisa မှယိုစိမ့်ဝန်ဆောင်မှုပို့ဆောင်ရေး Gateway မှာအဘယ်သူမျှမ 20 / 08 / 2018 နိုင်ငံသားများ၏သက်သာချောင်ချိရေးတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်နေသည့် application များတရားမဝင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များ၏ J ကိုပန်းကန်လျှောက်လွှာနယ်ပယ်များတွင်စစ်ဆေးခြင်းများစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း applications များစတင်ဘဝ Manisa မြူနီစီပယ်, နေခဲ့ရသည်။ Manisa မြူနီစီပယ်သည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရောက်နေပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသစ်နှင့်ခေတ်သစ်ဖျော့ Manisa မြူနီစီပယ်ဖြစ်စေသောလျှောက်လွှာသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ဂျင်မ်ပန်းကန်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့စတင်တရားမဝင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများတားဆီးပါကဤလုပ်ငန်းစဉ်အသက်မွေးမှုဖွကြောင်းနိုင်ငံသားများ၏မကျေနပ်မှုအသက်ရှင်ဖို့အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Manisa မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးစည်ပင်သာယာရဲ, အများပြည်သူစင်တာများသမ္မတ ...
Volvo Truck ကားဝန်ဆောင်မှုကင်ပိန်း
အတွက် Renault Trucks မှာချွေတာသုံးစွဲရေခဲသေတ္တာပို့ဆောင်ရေး
Manisa မှယိုစိမ့်ဝန်ဆောင်မှုပို့ဆောင်ရေး Gateway မှာအဘယ်သူမျှမ
Gefco တူရကီနှင့်အတူ Volvo လမ်းပြန်လည်စတင်မည်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်
Volvo ကုန်ကားနိုင်ငံတကာဒီဇိုင်းဆု (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ကအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ
Volvo FH16 အမိန့်6ယူရို (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်
Volvo CEVA အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းများရွေးချယ်တော်မူပြီ